Polonina: Ny “Open Government Data Camp 2011” Sy Ny Ho Avin’ny “Open Data” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Novambra 2011 8:26 GMT
Ny 4 Novambra 2011, dia nandefa ny famintinana ny Open Government Data Camp 2011 i Anna Kuliberda avy ao amin'ny NetSquared, izay natao tao Varsovie, Polonina, ny 21-22 Oktobra :
Ny faha 21-22-n'ny volana Oktobra ny renivohitr'i Polonina dia nampiantrano ny “Open Government Data” (OGD) izay hetsika goavana indrindra maneran-tany tamin'ity taona ity. Izy ity dia nokarakarain'ny Open Knowledge Foundation niaraka tamin'ny fiaraha-miasan'ny Centrum Cyfrowe Projekt Polska (rohy Poloney ihany). Olona maherin'ny 250 avy aminà firenena 41 no hita tao. Afaka miresaka amin'ireo” techies” ianao, ireo mpikambana avy aminà ONG mpandàla ny mangarahara, ireo mpanao gazety, ireo mafàna fo ara-tsôsialy, ireo tompon'andraikitra avy aminà governemanta, ireo solontenan'ny Kaomisionan'ny Vondrona Eoropeana sy ny sisa. Nandritry ny roa andro tena nanaovana ilay fivoriambe sy efa ho herinandrao nanaovana hetsika samihafa manodidina izany, dia nisy fotoana maro nanaraha-maso ny karazana fomba famindra rehetra mba hanokafana ny angon'ny governemanta, indrindra amin'ny lafin'ny fironana vaovao sy ny ho avin'ilay hetsika. […]
Ilay hetsika “Open Government Data Camp” teo aloha dia natao tao Londona tamin'ny taon-dasa, ary, araka ny navoitran'i Ramine Tinati
Tao anaty lahatsoratra tao amin'ny bilaoginy, “The State of Open Data 2011,” i David Eaves, dia nitanisa ireo fahombiazana azo tamin'ny taona lasa :
Open Knowledge Foundation dia nanaparitaka lahatsary maromaro avy amin'ny hetsika tao amin'ny Vimeo.com.
Afaka ahitàna lahatsoratra hafa ihany koa ato sy ao amin'ny Twitter.